အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂) (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ) ဆောင်းပါးရှင်(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ ဒီမိုဝေယံ
အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂) (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ) ဆောင်းပါးရှင်(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂)
(တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ)
ဒေသခံ ဥစား အသားစား- ကြက်စီမံကိန်း
သဘာဝ ဒေသခံ ကြက်များကို အများအားဖြင့် ကျေးလက်တွင်အဓိက သဘာဝအတုိုင်း လွှတ်ကျောင်းမွေးမြူကြပါသည်။ ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျေးရွာတွေမှာ တခါတရံ ကြက်နာရောဂါ ကျတတ်တော့ ကြက်နာကျလျင် ရွာလုံးကျွတ် ကြက်မျိုးတုံးသော အဖြစ်များကို မကြာခန ကြုံကြရပါသည်။ တခါ ကြက်ဥကို သဘာဝနည်းအရ ကြက်မကြီးကို ဝပ်စေသောအခါ ကြက်ကလေးများ ပေါက်ဖွားနှုန်းမှာ ဖေါက်စက်ဖြင့် ဖေါက်သော နှုန်းလောက် မရနိုင်သလို ကြက်မတစ်ကောင်သည် ပျှမ်းမျှ- ကြက်ကလေး ၁၂ - ကောင်လောက်ဘဲ ပေါက်တတ်ပြီး သားခွဲချိန်အရောက်တွင် အသားတင် ကြက်ကလေး..၆ - ကောင်လောက်သာ ပျှမ်းမျှရနိုင်ပါသည်။
တနည်း သဘာဝနည်းဖြင့်တော့ ဒေသခံကြက်ကိုမွေးမြူပြီး နို်င်ငံတော်တွင် ကြက်သားအထွက်တိုးရန် စီမံချက်ကို အားကိုးလို့ မရသည်ကတော့ သေချာပါသည်။ သို့ အတွက် ကျနော်သည် ယခုစီမံကိန်းကို တွေးတော ကြံဆယူမိပါသည်။. ဘယ်နိုင်ငံတွင်မှ စမ်းသပ်ခြင်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးထားခြင်း မရှိသေးသော စီမံချက်ဖြစ်ပါသည်။ တနည်း MY BRAIN CHILD PROJECT မြန်မာလိုတော့ ကျနော်ဦးဏှောက်က မွေးဖွားလာသော စီမံချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေရာမှာ စကာအသုံးအနှုန်းလေးကို (သိသူများရှိပါသည်။ မသိသေးသူများကို ရည်ညွှန်းပါသည်)။ အထက်ပါ စကားစု BRAIN CHILD နင့် CHILD BRAIN မှာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသလို အဓိပ္ပါယ်မှာလဲ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသည်။ Child Brain ကလေးဥိးဏှောက် ဟု နိမ်ပြောသော ဝေါဟာရဖြစ်ပါသည်။ Brain Child ဦးဏှောက်မှ မွေးဖွားလာသော နှင့်အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခု စီမံချက်ကို ဆက်လက် တင်ပြလိုပါသည်။ ဒေသခံရွာ ကြက်မကြီးက ဥများဥပြီး ဥများလာသောအခါ ကြက်မကြီးက ဥများအပေါ်တွင် ဝပ်ပေးပြီး ဖေါက်ပါသည်။ ကြက်ကလေးများ ပေါက်ရန် ၂၁ - ရက် ကြာဝပ်ရပါသည်။
ယခုနည်းတွင် ကြက်မကြီး စတင်ဝပ်လို့၂-ရက်ရတာနဲ့ ကြက်ဥဖေါက်စက်ဖြင့် ဖေါက်ထားသော ကြက်ပေါက်ကလေးများကို ထဲ့ပေးလိုက်တော့ ကြက်မကြီလဲ မပင်ပန်း ကြက်ပေါက်ချိန် ကိုလျှော့ချပေးနိုင် လိုက်ပါသည်။ မိမိလိုချင်သော ကြက်အကောင်ပေါက် အရေအတွက်ကို ထဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။
ကြက်မကြိးသည် ဝပ်နေစဉ်တွင် တရက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ဝပ်ကျင်းမှ ဆင်းကာ အညောင်းဖြေ.. အစာစား ရေသောက် တကြိမ်သာပြုရသည်မှာ အလွန်ပင်ပန်းသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ပေါက်ပြန်တော့လဲ ကြက်အကောင်ရေ အနည်းငယ်သာ ရပါမည်။
ကြက်မကြီးသည် သဘာဝသဘောအရ ကြက်ဥ ၁၂ -ဥ မှ ၂ဝ -ဥ ခန့် ဥပြီးလျှင် ကြက်ဥများအပေါ် ၀ပ်ပါတော့သည်။ ယခုနည်းတွင် ကြက်မကြီးကို ကြက်ဥအတုများ အပေါ်ဝပ်စေပါမည်။ သဘာဝတွင် ကြက်ကလေးများပေါက်ရန် ၂၁-ရက် ဝပ်ရပါသည်။ ဒီနည်းမှာတော့ ကြက်မကြိးဝပ်ရက်..၂- ရက်အရတွင် ဖေါက်စက်မှ တစ်ရက်သား နှစ်ရက်သား ကြက်ကလေးများ (အကောင် အရေအတွက် ( ကြက်မအရွယ်အစားကို လိုက်ပြီး ) အကောင် ၂၅-ကောင်မှ ၃၅ -ကောင်အထိ ကြက်မကြိးထဲကို ညဘက်တွင်ထဲ့ ပေးရပါမည်။
နောက်တနေ့ တွင် ကြက်မကြီးနှင့် ကြက်ပေါက်လေးများကို (၁ဝ-ပေ x ၁ဝ-ပေ) ကျယ်သော ခြံကလေးတွင် ထားရှိပါမည် ၎င်းခြံတွင် ရက်သတ္တ.၂- မှ ၃-ပတ်ခန့်အထိကြက်ပေါက်လေးများ သန်မာလာသည်အထိ ထားရှိပါမည်။
၎င်း (၁ဝ x ၁ဝ) ခြံလေးခြံကို အောက်ခြေကို (ကြက်ပေါက်လေးများ မထွက်နိုင်အောင်) အပိတ်အစ (ပလပ်စတစ်အထူ..။ မြွေခွံအိတ်အထူ၊ တာပေါ်လင်) စသည်ဖြင့် ကာရံထားရပါမည်။ ကြက်ပေါက်လေးများ တဖက်ခြံဘက်သို့ ကူးသွားမိလျှင် တဖက်ခြံမှ ကြက်မက သေအောင် သတ်တတ်ပါသည်။ အပေါ်ပိုင်းကိုမူ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်အဟောင်း (ဈေးပေါသည့်) ဖြင့်ကာထားပါမည်။ ကြက်ခြံလေးခုကို လေးဒေါင့်ဆက်စပ် ထိထားပါမည်။ အလယ်ကို လိုအပ်လျှင် မီးအပူပေးနိုင်ပါသည်။
ကြက်ပေါက်လေးများကို ကာကွယ်ဆေး ပြည်ပြည့်စုံစုံပေးထား ထိုးထားမည်ဖြစ်သဖြင့် တော်တန်ရုံကြက်နာ မကျနိုင်တော့ပါ။ ခြံအတွင်း အစာရေစာ လုံလောက်စွာနှင့် ထားရှိသည့်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကြီးထွား နှုန်းမြင့်မားပါသည်။
ကြက်ကလေးများကို အစာရေစာ လုံလောက်စွားကျွေးမွေးပြီး ၎င်းခြံတွင် ရက် ၂ဝ-ခန့်ထားပြီး သဘာဝ လွှတ်ကျောင်းနိုင်ပါပြီ။ နှစ်လခန့် အရတွင် သားခွဲပါတော့သည်။ ကြက်သားခွဲလျှင် ကြက်မကြီးကို အဖွဲ့ သို့ ပြန်ပေးရပါမည်။ ကြက်ပေါက်ကလေးများကို သဘာဝအတုိုင်း အစာရှာ စားသောက်စေသလို မနက်ပိုင်းနှင့် ညနေအိပ်တန်းတက်ခါနီးတွင် သဘာဝအစာများ (ပြောင်းဆံ ..ပြောင်းဖူးစေ့) များကျွေးမွေးနိုင်သလို သိပ္ပံစပ်ကြက်စာများလဲ ကျွေးနိုင်ပါသည်။ ၄-လမှ ၆- လခန့် အရတွင် ကြက်ကလေးများသည် အလေးချိန် ၇၅ - ကျပ်သားခန့် စီးလာလျှင် ရောင်းချနိုင်ပါတော့သည်။ ၈ - လခန့် အထိမွေးလျှင် လည်းပိုအသားတိုးပါသည်။ သဘာဝအတိုင်း လွှတ်ကျောင်းထားသဖြင့် ပိုးမွှားလေးများကိုလဲ စားနိုင်ခွင့်ရစေပါသည်။
၎င်းနည်းဖြင့်မွေးထားသော ရွာကြက်များကို FREE RANGE ORGANIC CHICKEN ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဈေးအလွန်ကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့ များများ ထုတ်လုပ်နိုင်လျင် မီဒီယာများတွင်လည်း သဘာဝရွာကြက်က ယောက်ျားဟော်မုန်း ပြည့်ဝစွာပါတာကို ရေးသားလာကြလျှင် ကျနော်တို့ပြည်ပဈေးကွက်ပင် တိုးလာပါမည်။
ကြက်ကလေးများ ဈေးကွက်ရောင်းချချိန်တွင် အဖွဲ့ သို့ယူထားသော ကြက်အပေါက်ကောင်ရေအလိုက် (ဥပမာ- ကြက်ပေါက် ၁ဝ- လျှင် တစ်ကောင်နှုန်း) ပြန်ပေးဆပ်စေပါမည်။ သို့ မှသာလျှင်အဖွဲ့ တွင် ဘတ်ဂျက် တိုးပွားလာသလို အဖွဲ့ တွင်လုပ်နေသာ အဖွဲ့ သားများကို လစာထောက်ပံ့နို်င်ပါမည်။ လက်ခံ တောင်သူတွင်လည်း မိမိနည်းရိုးရာသဘာဝ မွေးသည်ထက် ဝင်ငွေအဆများစွာ ပိုမိုလာပါမည်။ WIN - WIN ဖြစ်ပါသည် ။
သို့မှသာ စီမံကိန်းအလှုရှင်ကိုလဲ သူ၏အလှုသည် မည်မျှတိုးပွားလာပြီး တောင်သူမိသားစုအတွက် အဘယ်မျှ ဝင်ငွေတိုးတက် စေသည်များကို စားရင်းဇယားအတိအကျနင့် ပြသနို်င်ပါမည် ။ အလှုရှင်သည်မိမိအလှု ခြောက်လလျှင် တကြိမ် မည်မျှတိုးပွားလာနေသည်။ အဖွဲ့ တွင်လဲ မိမိလှူထားသော ကြက် (ဥပမာ -၁ဝဝ ကောင်)မှ အဖွဲ့ အတွက် မည်မျှတိုးနေပြီ။ လယ်သမားမိသားစု မည်မျှဝင်ငွေရရှိထားပြီ၊ ကြက်အကောင် မည်မျှအထိ တိုးပွားနေပြီကို သီးခြားစာရင်း ဇယားများဖြင့် ပြသနေနိုင်ပါမည်။ တခါလှူရုံနင့် ပဒေသာပင်လို တိုးပွားနေသော အလှုဖြစ်ပါမည်။
လယ်သမားတစ်ဦးသည် မြေနေရာအကျယ်အဝန်းအလိုက် ကြက်ပေါက်လေးများကို အဖွဲ့ မှ ရယူနိုင်ပါသည်။ မြေကျယ်ကျယ်ရှိသူ တစ်ဦးလျင် ကြက်မ ၄ မှ ၁ဝ ကောင်အထိ မွေးလို့ ရပါသည်။ ကြက်မတစ်ကောင်လျင် ပျှမ်းမျှ ကြက်ပေါက် ၂၅ မှ ၃၅ အထိထိန်း မွေးမြူစေနိင်ပါသည်။
လယ်သမားတစ်ဦးသည် ကြက်မ လေးကောင်ယူလျင် တစ်ကြိမ်ကို ၅- လခန့် မွေးရပါမည်။ မျှမ်းမျှ တနှစ်လျင် နစ်ကြိမ်ယူနိုင်လျှင် ကြက်ပေါက် အကောင်ရေ ( ၃ဝ x ဂ - ၂၄ဝ ) ရယူထားပါမည်။ အရွယ်ရောက်ကြက် အကောင် ၂ဝဝ အသားတင် ရှင်လျှင် အဖွဲ့ သို့(၁ဝ ကောင် တစ်ကောင်နှုန်းပြန်ဆပ်လျှင် ၁၇၅ ကောင်ရောင်းချနိုင်ပါမည်။
တစ်ကောင်သည် ပျှမ်းမျှ ၇၅ ကျပ်သားခန့် လေးပါသည်။ ကြက်ပိဿာချိန် ၁၃ဝ ပိဿာရှိပါမည်။ ကာလပေါက်ဈေး (ဒိုင်သွင်းဈေး ) - ၄၅ဝဝ ကျပ် ဈေးဖြင့်သွင်းရလျှင် ၅၈ဝဝဝဝ ခန့် ဝင်ပါမည်။ အစာဖိုးနုတ်လျှင် ၄ဝဝဝဝဝ (လေးသိန်း) ခန့်ဝင်ပါမည် ။
စာရင်းစစ်အဖွဲ့ များလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်အောင် နေ့ စဉ်စားရင်ကိုင်းအဖွဲ့ ထားရှိထားရပါမည်။
(၁) သဘာဝနည်းအတိုင်း ကြက်မကြီးကို ဝပ်စေသောနည်းဖြင့်နိုင်ငံတော် တွင်အသားအထွက် တိုးအောင်လုပ်ဆောင်ရန် ဘယ်လိုမှ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။
ယခုနည်းသော်၎င်း အလားတူ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းသော်၎င်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ရပါမည်။ ရွာကြက်သား အထွက်တိုးလာလျှင် သိပ္ဗံကြက်သားဈေးမှာ ချက်ချင်းကျလာပါမည်။ သူတို့ မှာ လိုအပ်လျှင် ဈေးချနိုင်ပါသည်။
(၂) တောင်သူလယ်မားများ မြို့ ငယ်နေ ခြံကျယ်ရှိသော မိသားစုများ ၊ တပ်မတော် မိသားစုများ ကို ဒုတိယဝင်ငွေတိုးစေပါမည်။ သမ္မတကြီး၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးအတွက် တစ်နည်းတစ်ဖုံ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါမည်။
(၃)ကျားဟိုမုန်းများသော ဒေသခံ ကြက်သားကို စားသုန်းခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ယောက်ျားလေးများ အခြာက်ဖြစ်မှု များလာမှုမှ တားဆီးနိုင်ပါမည်။
(၄) စားသုံးသူတို့ အတွက်လည်း အရသာပိုကောင်းသော အဟာရပိုမိုပြည့်ဝသော။ သဘာဝကို မလွန်ဆန် အသားကို ပေါပေါလင်လင် စားသုံးခွင့်ရစေပါမည်။
(၅) ယခုနည်းသည် ကြက်ဥဖေါက်စက် အတွက်သာ အရင်းအနည်းငယ်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူပြီး လုပ်ငန်းချဲ့ ရန်လွယ်ကူသည့်အတွက် အလျင်အမြန်ချဲ့ ထွင်နိုင်ပါသဖြင့် ကြက်အကောင်ရေတိုးရန် အသားအထွက်တိုးရန် အရင်းအနှီး အနည်းဆုံး နည်းဖြစ်ပါသည်။
(၆) မီဒီယာများနင့် ဆေးပညာရှင်များမှ ဟော်မုန်းကိစ္စ သဘောတူလက်ခံပြီး ကမ္ဘာသိလာအောင် ရေးသားလာကြလျင် မြန်မာတောရွာကြက်ဈေးကွက် ကမ္ဘာကိုဖြန့် နိုင်လာပါမည်။ FREE RANGE ORGANIC CHICKEN ဈေးကွက်ကြီး ပေါ်လာပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ထိုဈေးကွက်၏ ပင်မဖေါက်သည် ဖြစ်ပါသည်။
(၇) ကြက်မကြီးနင့် ကြက်ပေါက်လေးများ သားခွဲပြီးလျင် မွေးမြူသူသည် ၎င်းလုပ်နိုင် ထိန်းနိုင်လျင် တနှစ်ကို ကြက်မနှင့် သားပေါက် ၅ ကြိမ်ခန့် အထိ ယူနိုင်ပါသည်။ ထိူပမာဏနှင့် မွေးနိုင်လျှင် တနှစ်ဝင်ငွေ ၁ဝ သိန်းခန့် အပိုဝင်ငွေ တိုးစေပါမည်။
(၈) ကျေးရွာတွေမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၍ တနေ့ တခြားလူများမြို့ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာနေမှုကိုဟန့် တားနိုင်ပါမည်။
(၉) မြန်မာများကြက်သား နှင့်ကြက်ဥဈေးပေါလျှင် များများစားလာကြသည့် အတွက် မြန်မာလူမျိုးများ ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ ဖြိုးကြီးထွားလာပြီး ကျမ်းမာရေး စားရိတ် လျော့ကျလာပါမည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်အတွက် လုပ်အားစွမ်းရည်များလည်းတိုးပွားလာပါမည် ။
ကျနော် စဉ်းစားမိသမျှ ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဒုတိယ ဝင်ငွေ)
ဆောင်းပါးရှင်(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) အပိုင်း(၁) ပြန်ဖတ်လိုလျှင်
အာဏာသင်္ခါရ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ နေသည့် အသံဖိုင်ကြောင့် ထိ...
သင်သည်လည်းလူ ဘယ်လိုလူလဲ (မင်းသုည ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
ရှေးဟောင်း သာသနာမြေပေါ်တွင် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်သူမျာ...
ဦးကျော်သူ၏ ဗြဟ္မစိုရ် စကားလုံးများနှင့် Here & Now...
နိုဝင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့က သြစတြေးလျနိုင်ငံရောက် လူထုခေါ...
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့ တွင် နိုင်ငံတော်အခ...
ho will be Miss International 2013? မှာ မြန်မာမှတ...
ဓမ္မပန်းကုံး ပန်ဆင်သုံး လူတိုင်းပြုံးရမည်.. ...
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး (ဘာသာပြန...
တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာပွဲတော် မြင်ကွင်းမ...
Tin Ko Ko မှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ၀န်ကြီးသို့ ပေးစာ.....
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့ ဓမ္မိကာရာမ မြန်မာဘုန်းတေ...
အသားတိုး ဒေသ ခံကြက်စီမံကိန်း အပိုင်း(၂) (တောင်သူ...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှ ၄ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း ...
အသားတိုး ဒေသခံကြက်စီမံကိန်း (တောင်သူလယ်သမားများ၏ ...
တပ်မတော်အတွင်း အဓမ္မစေခိုင်းမှုများကို တိုင်ကြားခြင်...
ကလေးပြုစုရေး (၂) ဆောင်းပါးရှင် (ဒေါက်တာလှိုင်မြင်...
သစ်ချောက်ပင်ကြီးများ ကဗျာရှင် မင်းသုည(ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်...
တိုင်တော့တိုင် မှန်တာ မမှန်တာတွေ မပါကြေး...
HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရသော Srako (စရကို)မှ မြန်မ...
မြန်မာပြည်၏ ဝေါ့ဒစ္စနေးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး (ဆရာကြီး...